Sheeko | Laashin iyo Hal-abuur
Ibraahin-Nolosha - March 17, 2022 0
Beertii Nagaashaha Waa Siibad yar oo galbeed ka soo oodan, dhanka barina bursho yar kaga beegan. Qudaar Yaanyo u badan ayaa ka belbelaysa, oo dabayshu si arxan daran u babbinaysaa. ...
Ibraahin-Nolosha - January 16, 2022 0
Ma ahayn in laga cabsado araggiisa, waxa ay ahayd in lagu farxo muuqiisa. Ma ahayn in uu dilo saydigiis, waxa ay ahayd in uu wax badan akhriyo si uu...
Cabdiraxiin H Galayr - November 21, 2021 0
DULMAN Q2AAD Maalmo kooban gudahood ayay u kooraysanaysaa dhankaas iyo Kiinya, waxay galaysaa safar ka dheer kii Boosaaso, kase ammaan iyo degganaan badan. Waxaa la marayaa degaan dadkiisu inta badan...
Cabdiraxiin H Galayr - November 16, 2021 0
DULMAN Q1AAD Dulman, waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay Soomaaliya oo maamulla'aan ah. Dhaca, boobka, dilka iyo kufsiguna ay ka mid yihiin nolol-maalmeedka. Indhaheedu waxay in badan qabteen; jidadka magaalada...
Cali M. Diini - August 7, 2021 0
Sida ay sheegeen taariikhyahannadii Roomaanku gaar ahaan Virgil oo noolaa sannadihii 70 CH ilaa 19 CD galabtii Aeneas ka shiraacday Boqorad Dido oo indho jacayl ku eegaysa ayaa colaadda Qardiijiya iyo Room bilaabatay.